तपाईंले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ? नत्र यो लफडामा फस्नुहोला ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईंले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ? नत्र यो लफडामा फस्नुहोला !
तपाईंले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ? नत्र यो लफडामा फस्नुहोला !
जेठ ८ गते, २०७६ - १६:३१
धादिङ । गीतानगरका उपेन्द्र पण्डितको मोबाइलमा धादिङका प्रहरी हबल्दारले टेलिफोन गरेर उहाँको नामको मोटरसाइकल जुधेर मानिसको मृत्यु भएको खबर दिए । पण्डितलाई यो कुरा सुन्ने बित्तिकै छाँगाबाट खसे जस्तो अनुभव भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौर सवारी साधन बिक्री गरेपछि तत्काल नामसारी गर्नुपर्ने बताउछन् । अर्काको सवारी साधन चलाउनेलाई पनि राम्रो नहुने भन्दै उहाँले यो सन्देश सबै सवारी धनीलाई पु¥याउन जरुरी देखिएको जानकारी दिए ।
जेठ ८ गते, २०७६ - १६:३१ मा प्रकाशित